CIN Khabar हिन्दुराज्यको पक्षमा जनमत राम्रो पाएँः राप्रपा अध्यक्ष थापा
हिन्दुराज्यको पक्षमा जनमत राम्रो पाएँः राप्रपा अध्यक्ष थापा राप्रपाको ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा’
सीआईएन बुधबार, फागुन २२, २०७५, ०१:२४:००
राप्रपाको खुट्टी अब संसदमा हाम्रो कतिवटा प्रतिनिधित्व छ भन्ने आधारमा चाँही गर्न हुँदैन हेर्नुस् । जनताले चाह्यो भने एउटा परिवर्तनको आँधीबेहेरी आउनसक्छ, र आगामी निर्वाचानमा हामी अग्रणी शक्ति बन्न सक्छौं
काठमान्डौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा’ का क्रम देश दौडाहमा छ । नेपाललाई सनातन हिन्दूराज्य बनाउने अभियानमा जनसमर्थन जुटाउने उदेश्यले राप्रपाले यात्रा थालेको दावी गरिएको छ । राप्रपाको ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा’ किन ? राजन रुचालले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई सोध्नुभएको छ ।
बास्तबमा नागरिकको अपेक्षा पनि बुझिन्छ र त्यसको साथसाथै नागरिकलाई जागरुक तुल्याउन पनि हामीले ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा’ थालेको हो ।
तपाई त लामो समय शक्तिमा रहेको मान्छे, यो बेलामा आएर किन नागरिकको अपेक्षा बुझ्नु परेको ?
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी शुरु देखि नै धर्म निरपेक्षताको विपक्षमा हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेको पार्टी हो । त्यसको साथै हाम्रो दृष्टिकोणमा गणतन्त्रको सट्टा राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र उपर्युक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । राजसंस्था हटाईएको १२ वर्ष पुग्यो । तर यो १२ वर्षमा के परिवर्तन भयो ? कति प्रगति भयो ? आज प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । त्यहि प्रश्न गर्नको लागि पनि हामी यो यात्रामा छौं । नागरिकको मत बुझिरहेका छौं ।
१२ वर्षमा खोला पनि फर्कन्छ भन्छन्, हिन्दुराज्य र राजसंस्था फर्काउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र कायम गर्ने बारेमा अहिले हाम्रो जोड सर्वपक्षिय सम्मेलनको निमित्त भएको छ । त्यसको सम्भावना पनि म देख्दछु । त्यसकै लागि हामीले प्रधानमन्त्री ज्युलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं । हिन्दुराज्यको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूख्य माग छ ।
तर तपाई पूर्व पञ्चहरु नै एक हुन सक्नु भएको छैन, यस्ता मुद्धामा जनतालाई प्रभावित गर्न सक्नुहुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?
अब यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । तपाईले एकदमै उपर्युक्त प्रश्न गर्नुभयो । बास्तवमा जुन एउटा सहमतिको एउटा अवधारणा पत्र हामीले तयार गरेका छौं । त्यो मैले नै बनाएको हो । त्यसमा तीन पार्टीबीच एकता गर्ने भनेर लेखिएको थियो । त्यस्लाई टिपेक्स लगाएर, हामीलाई अलग गरेर दुई वटा पार्टी, पशुपति जी र प्रकाश जी मात्रै एक हुनुभयो । त्यसले गर्दा खेरि एउटा खिन्नताको स्थिति छ । तर ढिलो चाँडो उहाँहरुले अहिलेको जनताको भावनालाई बुझ्नु हुनेछ । कार्यकर्ताको दवाबलाई बुझ्भु हुनेछ र एकतामा आउनुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाईहरुको अभियान जस्तै बाबुराम भट्टराईले पनि अभियान चलाउनुभएको छ, बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तीको मेची महाकाली अभियान र कमल थापाको मेची महाकाली अभियान संयोग मात्रै हो कि ? अरु केहि छ यो भित्र ?
उहाँको जनसम्वाद यात्रा अलि सिमित घेराभित्र भईरहेको मैले देखिरहेको छु । हामी चाँही सभाहरु नै गरे पनि हिंडिरहेका छौं । अब बाबुराम जीसँग भेट भयो भने यस बारेमा म कुरा गर्नेछु । र कतिपय राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा हामीसँगै मिलेर पनि जान सक्छौं ।
तपाईहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष हिन्दुराज्य र राजसंस्था फर्काउन भन्दै, ज्ञापनपत्र पनि बुझाउनु भयो । त्यो आँट चाँही कसरी गर्नुभयो ?
अब हेर्नुस् बास्तवमा प्रधानमन्त्री ज्यु स्वभाविक रुपले गणतन्त्र पक्षधर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ । तर उहाँ त देशको प्रधानमन्त्री हो । देशको सबै पार्टी, सबै समूहको, समूदायको जनताको भावना उहाँले बुझ्नु पर्दछ । जुनसुकै बिचारधार जुनसुकै पार्टीको भएतापनि हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने बारेमा चाँही जनता सडकमा उत्रिन्छन् । प्रधानमन्त्री जीले पनि यो राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ ।
राप्रपाको खुट्टी हेरेर जनताले साथ दिन्छन् भन्ने कुराको ग्यारेन्टी चाँही कसरी गर्न सकिन्छ ?
राप्रपाको खुट्टी अब संसदमा हाम्रो कतिवटा प्रतिनिधित्व छ भन्ने आधारमा चाँही गर्न हुँदैन हेर्नुस् । जनताले चाह्यो भने एउटा परिवर्तनको आँधीबेहेरी आउनसक्छ, र आगामी निर्वाचानमा हामी अग्रणी शक्ति बन्न सक्छौं ।
मेची महाकाली अभियान आधाआधी हुँदा त्यो खालको जनमत तपाईहरुको पक्षमा देखिन्छ ?
अब हेर्नुस्, हाम्रो पक्षमा जनमत अत्यन्तै राम्रो देखेको छु मैले । पहाडी जिल्लाहरुमा भन्दा मधेसका जिल्लामा राष्ट्रियताका बारेमा बढि चिन्ता रहेको देखेको छु । हामीसँग मानिसहरुले राष्ट्रियताबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मलाई लाग्छ, राप्रपाको पक्षमा यो बेला राम्रो जनमत देखिएको छ । यो बेला हिन्दुराज्यको पक्षमा माहोल राम्रो देखिएको छ ।
अनि राजसंस्थाबारे चाँही ?
राजसंस्थाको बारेमा चाँही नागरिकमा एक खालको धारणा छ । यो विषयमा पनि सर्बदलिय सर्बपक्षिय वैठक बसेर टुंग्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन २२, २०७५, ०१:२४:००